Hollywood ရုပ်ရှင်ဖက် ဦးပြန်လှည့်လာတဲ့ Nintendo- Yay or Nay? - MoviesFan
Hollywood ရုပ်ရှင်ဖက် ဦးပြန်လှည့်လာတဲ့ Nintendo- Yay or Nay?
Video game လောကမှာ အထင်ရှားဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Nintendo ဟာ ဆယ်စုနှစ် ၂ခုကျော်အကြာမှာ Hollywood ဖက်ကိုပြန်ပြီး ဦးလှည့်လာတော့မှာပါ။
မသိသူမရှိလောက်အောင်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့၊ လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်တဲ့ Poke’mon နဲ့ Super Mario Bros တို့ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Nintendo ဟာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကြာပြီးမှ Hollywood ဖက်ပြန်လှည့်ပြီး franchaise licensed ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါဟာ Nintendo အနေနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Hollywood live action movie ဖက်ကိုပြန်ဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် Super Mario Bros ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ပဲ မျက်နှာပန်းမလှခဲ့တာကြောင့် Hollywood ကိုစိတ်နာသွားပုံရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် Hollywood ကိုကျောခိုင်းထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၆ မှာ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ AR game Poke’mon Go ရဲ့ အားကိုးနဲ့ မကျေပွဲပြန်နွှဲမယ့်အနေနဲ့ Detective pikachu ဆိုတဲ့ live action movie ကို ၂၀၁၉ မေလဆန်းမှာ ထုတ်တော့မှာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ မှာ ရိုက်ကူးရေးတွေကို စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ live action movie အတွက် franchise လိုချင်ခဲ့တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ Legendary Entertainment ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး Legendary entertainment, Nintendo နဲ့ Poke’mon Company International စတဲ့ production တွေလက်တွဲပြီးလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ live action movie တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။
Release လုပ်မှာကတော့ USA မှာ မေလ ၁၀ရက်နေ့လို့ အတိအကျသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမယ့် တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ မေလအတွင်းလို့ပဲပြောထားပါတယ်။ အဓိက cast တွေအနေနဲ့ Detective picachu အဖြစ် Ryan Reynolds, Lucy အဖြစ် Kathryn Newton, Tim Goodman အဖြစ် Justice Smith တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ်လို သိရပါတယ်။ ကိုယ်တွေရဲ့ Deadpool မင်းသား Ryan Reynolds ဟာလည်း စုံထောက်ကြီး ပီကာချူး အနေနဲ့ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
၂၀၁၆ မှာ hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Poke’mon Go ကျေးဇူးကြောင့် Pikachu ကိုသိခဲ့ရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေသာမက card game ခေတ်ကတည်းက Pikachu ကိုစွဲလမ်းခဲ့ကြတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့် Nintendo ရဲ့ Detective Pikachu ရဲ့ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Yay or Nay?… အဲဒါက ၂၀၁၉ မေလကျရင်အဖြေပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image source: www.pokemon.com, www.nintendo.com
Previous Post: ဖြစ်ရပ်မှန် ကျိန်စာသင့်အိမ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ Ghost House
Next Post: ကမ္ဘာကြီးမှာလူတွေရဲ့အရွယ်အစားကို သေးငယ်ပစ်လိုက်ရင် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ ”Downsizing”